Tsipy kanetibe – «Grand Prix de l’Etang-Salé» : norombahin-dRadoko sy i Jeannie ny amboara | NewsMada
Tsipy kanetibe – «Grand Prix de l’Etang-Salé» : norombahin-dRadoko sy i Jeannie ny amboara
Nisongadina indray ny fahaiza-manaon’ny Malagasy, nandritra ny «Grand Prix international de l’Etang-Salé», taranja tsipy kanetibe. Norombahin’i Madagasikara indray mantsy ny fifaninanana.
Lasan’i Madagasikara, tamin’ny alalan-dRazafinirina Jeannie sy Ralison Guillaume (Radoko), ny andiany faha-16 amin’ny «Grand Prix international de l’Etang-Salé», taranja tsipy kanetibe, ho an’olon-droa miaraka. Fihaonana, notanterahina tao amin’ny kianja Champ de Foire des Bains, ny asabotsy 30 septambra sy ny alahady 1 oktobra lasa teo.
Resin-dry zalahy, teo amin’ny famaranana, ireo Reonioney, Mickael Nayagom sy i Fabrice Técher. Tamin’ny isa mazava, 13 no ho 7, ny nibatan’i Jeannie sy Radoko ny “Trophée Hydrotech”.
Nisongadina tanteraka ny fahaiza-manaon’izy mirahalahy ary nampiaiky ny mpifanandrina sy ireo mpijery tonga maro tany an-toerana. Anisan’izany ny nanilihany an’i Jessy Feltain sy i Jeremy Darodes, tompondakan’i Frantsa, teo amin’ny ampahefa-dalana. Niondrika teo anatrehany, tamin’ny isa mavesatra, 13 no ho 4, ry zareo Frantsay. Mbola nataon’i Jeannie sy Radoko nahita faisana ihany koa ny tompondakan’i La Réunion, nahitana an’i Stéphane Mussard sy i Charles Chéreau, teo amin’ny ampaha-32-ndalana.
Nahatratra 500 ireo mpifaninana, tamin’ity andiany faha-16 ity, avy amin’ny firenena enina dia i La Réunion, mpampiantrano i Maorisy, i Mayotte, i Rodrigues, i Frantsa ary i Madagasikara.
Fiara indray izao
Ho an’ny fifaninanana «Grand open doublette boss», hotanterahina ny 14 sy 15 oktobra ho avy izao etsy amin’ny kianja CBT Mahamasina. Fifaninanana, karakarain’ny federasiona miaraka amin’ny orinasa Orange ka hiadiana fiara Matiz.
Nambaran’ny mpikarakara fa amin’ny alalan’ny fanasana manokana ny fandraisana anjara, izay mitentina 500.000 Ar. Hentitra ny sivana eo amin’ny fandraisana ny antsoina hoe : “boss”, izay hisy komisiona manokana. Ankoatra ny fiara, mbola hahazo amboara sy finday “Smartphone”, avy amin’ny Orange, ny voalohany. Fahitalavitra “écran plat” kosa ny an’ny faharoa, miampy amboara sy loka maro avy amin’ny mpanohana ary bisikileta VTT sy medaly ny an’ny fahatelo sy fahefatra.
Morondava: Andry Rajoelina en prospection 25/05/2019
Echos des régions 25/05/2019